AabBayaasha laqdabada (beenta) iyo luggooyada oo 1-da Luuliyo lixdankii xusaya!
Ilaah baa mahad dhamaanteed leh, nabadgelyo iyo naxariis Nabi Muxamed korkiisa ha ahaatto.
Markaan damco inaan iska loox-jiito oo aan damco inaan lafahayga wax ubarto waxaa halkaan soo liqdaaran niman laqdabo iyo luggooyo ay u tahay labadii lugood ee ay ku soconayeen. Shacabku waa lulmaysanyahay haddaynaba daawada suuxiska la siin.
Salaan Carrabeey mar la yiri haweenay uu qabay baa nin kale guursaday ayuu wuxuu tirshay gabay. Waxaa ku jiray:
Rag wax gaara gabadhuu qaboo guurna lagu sheegay
Iyo gamas mariid leh oo galay jirkiisiiye
Labadaas garbuu raggabu gama’ la diidaaye.
Allaha u naxariisto Salaan Carrabeey. Haddaad ufiirsatid labadaas bayt ee hore waxaa kusoo baxaysa in ninkaas caqligiisu caqli dhaafay. Bayt-ka hore waa siduu u yiri oo wax ka daran ma jiro nin haweentiis isagoon furin la guursado laakiin gamas mariid leh oo gala jir nin ma yahay waxa ugu daran ee rag gaara? Salaan Carrabay wuu ogaa laftiisu inuusan ahayn laakiin wuxuu yiri: labadaas garbuu ragguba gama’ la diidaaye. Waa runtiis oo qof qaba dhaawac intaas leh iyo hurdo kala tage. Marka ma jiro qof gabaygiisa faraha la gali kara ilayn wuu ogyahay waxa lagu qabsan karo iyo waxa kale waana in uu meel uga soo haraa.
Waxaan uga golleeyahay waxaa gabayga ku jiray:
Lo’dii shalay miirtii goosatee gaawo laga waayey.
Qaybtii kale hadda ma xasuusto laakiin wuxuu cabbiray lo’ inta maalintii u dambaysay soo cabtay biyihii ugu dambeeyey ee harada oo haddana maalintii dambe is kaga soo aroortay meel eber ah ee garanwayday in ay dorraad ay biyihii laysatay.
Ma usoo taagnaydeen qab-qablayaal qaadaya Soomaaliyeey toosoo, toosoo isku tiirsada ee? Bal qab-qable iyo isku tiirsanaan! Oo haddana leh: hadba kiina taagdaranee taageera waligiinee? Bal qab-qable iyo taageerid qof taag daran!
Soomaalidu waxay tiraahdaa ninkii mindida ku dhufta iyo kii inta iska dhiga inuu kaa bixinayo hadba dhinac udhufta wax isma doorshaan ama sidii uu Qamaan u lahaa:
Iyo kii duleelshaay ku yidhi, wax isma doorshaane.
Maxay qab-qablayaashu ku keeneen inta wixii la ogaa sameeyeen oo qarankii dumiyeen oo ummaddii ka dhigeen mid ay qalaan, mid ay qafaashaan, mid ay qowsaar ka dhigtaan iyo mid dibad u qaxay in ay inta Mbagathi xaflad ku qabtaan oo heeso iyo hadalo qiiro leh qaadaan ay ilmo ka soo qubato?
Qab-qablayaashu meeqa jeer na dileen? Jees-jeeska ayaa ani iiga daran.
Muxuu Khaliif u lahaa:
Maqligiisa waa tuu ku dilay meel aan la arkayne
Doqontii nin kale maamushaa malaha Iimaane
Aalaaba waa gargaar meel maruu dib ugu meershaaye
Mushrigii Fircoonna u tagyoo maaddadii usheegye.
Yaa hadda maamula qabqablayaasha? Maraykan muran baa ku jira laakiin Amxaaradu qaar badan bay maamushaa.
Tixdaan waxaa loo isticmaali karaa marka inta qof walaalkiis oo cadow dulminayo inta ka cesho kaddib axadkii la caawiyey uu cadowgii usheego in hebel uu saas iyo saas falay. Waa waxa hadda haysta qof kasta oo ku yiraahda qabqablayaasha Ilaahay ka baqa oo dadkan sidaan u dhaama, ayaa qab-qablayaashii iyo qaar taageera inta cadowga u tagaan dhahaan waa argagixiso!
Bal Juxaa iyo nin wax kala qabsaday aan aragno.
Juxaa wuxuu yiri anoo maalin safar ah oo dariiq maraya ayaa gaajo xun iqabatay kaddibna waxaan is iri gaajadu waa malage maad cuntadaada iska cuntid kaddibna jidka bartankiisa ayaan cuntadii la fariistay.
Wuxuu yiri: nin i garanayey ayaa igu soo baxay isagoon i salaamin buu yiri: war Juxoow maxaad ku dhex jirtaa? Juxaa wuxuu igu jawaabay waa arrin ay dadku sameeyaan. Ninkii wuxuu yiri maya waa arrin aan dadku samayn. Juxaa wuxuu yiri maxaad igu aragtaa? Ninkii wuxuu yiri ma u qalantaa adoo fadligaas iyo cilmigaas leh inaad dariiqa dhexdiisa wax ku cunto? Juxaa wuxuu yiri oo maxay dhib leedahay? Ninkii wuxuu yiri: miyaadan ogayn in arrintaasi ay qofnimadaada dhaawacayso oo aad dadka indhahooda ka soo dhacaysid? Juxaa wuxuu yiri inta ninka doqonimadiisa ku qoslay ayaan iri: meeye dadkaad sheegaysid? Ninkii wuxuu yiri: waa kuwaas iyagoo koox koox ah kugu soo maraya adoo cunto meesha la fadhiya. Juxaa wuxuu yiri waxaani dad ma ahan ee waa Lo’.
Juxaa wuxuu yiri waxaan ka baqay in dadka dariiqa maraya inta maqlaan doodda ay nagu soo leexdaan ilayn dadku wax ka war jecele oo uu markaa iga guulaysto in wuxu dad yihiin.
Juxuu wuxuu yiri markuu ninkii damcay inuu dhaqaaqo ayaan iri sug wax yar aan ku tuso waxaan sheegayee.
Juxaa wuxuu yiri inta liqay wixii afka iigu jiray ayaan dhawaaqay anoo leh dadoow kaalaya waan idin wacdinayaaye. Wuxuu yiri dadkii meel kasta waa iiga yimaadeen iyagoo isku soo buuranaya meeshii aan taagnaa.
Kaddib waxaan gudagalay buu yiri wacdigii. Waxaan ku iri buu yiri: dadoow waxaad tihiin xoolo oo kale bal waa ka liidataan. Waxaad tihiin xaabada naarta jahanamo maalinta qiyaame. Wuxuu yiri qofkasta oo ka mid ahaa waxaa soo dhaafay ilmadii oo dhabankiisa qoysay, qof kasta goradda (madaxa) ayuu hoos u laad-laadshay. Wuxuu yiri halkaas baan ka miisay annoo iyaga haysta oo ku dul akhrinaya Aayadihii iyo Axaadiistii ka sheekaynayey ummaddihii la halaagay. Wuxuu yiri waxaan sheekadii ku soo xiray oo aan ku iri: waxaan khabar ku helnay in qofkii carrabkiisa soo saara oo foodiisa taabsiiya sanka dushiisa in dambigiisii hore iyo kiisa dambe loo dhaafayo! Wuxuu yiri qof kasta oo iyagii ka mid ah wuxuu isku dayey inuu inta carrabkiisa soo saaro sankiisa taabsiiyo. Wuxuu yiri iyagoo la rafanaya arrintaas oo isku dayaya inay ajarkaas helaan ayaan ninkii saaxiibkayga ahaa ku iri: fiiri xaggooda ma dad baa mise waa lo’?
Waxaan leeyahay ka warrama dadkeena inta qabqablayaashu tagaan Mbagathi oo hadalo qiiro leh ku hadlaan leh waxaan ku faraxsanahay 1-da Luuliyo, marka ma shacbi baan nahay mise shimbiro?
Waxaan aaminsanahay in aysan qab-qablayaashu dad noo arag maxaa yeelay inta mid dhintay iyo mid dhimanaya naga dhigeen ayaa dadka badankiisii nin walbaa wuxuu raacay kay qabiil isku xigeen. Intii kalana waxay ka dhaadhiciyeen inay yihiin dad dhibta na haysta ka damqanaya. Waxay keeneen inay sidii fannaanniintii ay riwaayado jilaan.
Sharwadayaashu xaggay dhibta ka keenaan? Aan u fiirsano sida ay akhbaarta u helaan.
Shaydaan xaggee buu Aadam (CS) iyo Xawaa (CS) ka soo galay? Wuxuu ogaa sha’niga geedkii la yiri ha cunina. Markaas ayuu Aadam iyo Xawaa oo akhbaarta geedka Ilaah u sheegay u tagay oo yiri geedka arrintiisu waa saas. Waa been abuur ma Ilaah baa yiri haddaad geedka cuntaan dhiman maysaan ama waxaad noqonaysaan malaa’ig?
Ilmo yacquub beentii ay abuureen xaggee ka keeneen? Waxay ka qaateen hadalkii Yacquub (CS) ee ahaa waxaan ka baqayaa in ay uubato cunto, iyaguna markay ceelka ku rideen sidee bay ku hadleen oo waxay dhaheen yeey baa cuntay. Arrimahan culimadaa sidaas uga hadashay.
Qab-qablayaashu inay 1-da Luuliyo udabbaaldagaan xaggee ka keeneen? Waxay ogyihiin in ay shacabka agtooda qiimo ku leedahay. Iyaguna ilayn wax saas ah nooma arkaane waxay bilaabeen inay noogu soo dhuuntaan 1-da Luuliyo.
Sidoo kale halkeey qabqablayaashu ka keeneen in qofkii ay is qoonsadaanba dhahaan waa Al-Qaacida? Qof kasta waa ogyahay in ay Bush ka soo barteen iyo Maraykan ka soo barteen.
Marka sidii Ilmo Yacquub inta qarankii iyo Soomaali oo dhan god ku rideen in haddana ilmadu kasoo qubato iyagoo dhibka nala qaybsanaya, waa aakhiru samaan.